WordPress: # 1 प्लगइन प्रत्येक साइट हुनु पर्छ | Martech Zone
बिहीवार, जनवरी 4, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
आज मेरो साइट ध्वस्त भयो !!! मलाई थाहा छैन कुन स्प्यामबॉट्सको सेटले मलाई समात्यो, तर तिनीहरूले दिनभरि मेरो वेबसाइट मार्दैछन्। यी टिप्पणी स्प्याम-बट्स हुन् जसले स्प्याम टिप्पणी सबमिट गर्न फेरि प्रयास गर्दछन्। यस प्रकारको आक्रमण विरूद्ध वर्डप्रेसको कुनै सुरक्षा छैन। र Akismet केवल टिप्पणी स्प्याम सबमिशन पछि मद्दत गर्दछ।
मलाई केहि चीज चाहिएको थियो जुन मूल रूपमा पोष्टलाई अस्वीकार गर्दछ र वास्तवमा त्यो के हो खराब बानी प्लगइन गर्छ।
यहाँ यसले के गर्छ ब्रेकडाउन छ:
खराब व्यवहार PHP स्क्रिप्टहरूको सेट हो जसले स्प्यामबट्सलाई तपाईंको साइटमा पहुँच गर्नबाट रोक्छ उनीहरूको वास्तविक HTTP अनुरोधहरूको विश्लेषण गरेर र ज्ञात स्प्यामबट्सबाट प्रोफाइलहरूमा उनीहरूसँग तुलना गरेर। यद्यपि प्रयोगकर्ता-अभिकर्ता र रेफरकर्ता भन्दा टाढा जान्छ। खराब व्यवहार धेरै PHP- आधारित सफ्टवेयर प्याकेजहरूको लागि उपलब्ध छ, र कुनै पनि PHP स्क्रिप्टमा सेकेन्डमा एकीकृत गर्न सकिन्छ।
प्लगइन स्थापना हानिरहित थियो र मेरो साइट फिर्ता छ। संयोगवश, खराब बानी मैले १० मिनेट पहिले स्थापना गरेदेखि नै 50० भन्दा बढी प्रस्तुतीकरणहरू रोकिएको छ। मेरो साइट पहिले नै धेरै राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छ किनकि डाटाबेस गतिविधि यति तल छ। साथै, मेरो अकिस्मेट लाइन अब एकदम चाँडो भरिने छैन।
म आज राती मेरो प्रत्येक ग्राहक साइटहरू मार्फत गएँ र स्थापना गरें खराब बानी जोड्नु। म चाहान्दिन कि उनीहरू जस्तो मसँग थिए। म उनीहरूलाई अन्य प्रविधिहरूको साथ दिमागमा राख्न पनि छु, खराब बानी धेरै विभिन्न प्लेटफार्महरूको लागि तिनीहरूको प्रविधि विकास गरेको छ।
कृपया ती व्यक्तिहरूमा एक जोडी पैसा फ्याक्न नबिर्सनुहोस्। म तपाईंलाई भन्न सक्दछु कि आज to साइटहरू जुन मसँग छ कि मैले मेरो सामान्य दैनिक राजस्वको% ०% खर्च गरे ... (त्यसैले म आज मेरो स्टारबक्स वहन गर्न सक्दिन!)
अद्यावधिक: १/1/२००8 - मेरो एक ग्राहकको मुद्दा थियो कि उसलाई लगइन पृष्ठ मार्फत जडान अस्वीकार गरियो। केही अन्य साइटहरूको समीक्षा गर्दा मैले पत्ता लगाए कि बुरा व्यवहार पनि ह्वाइटलिस्ट प्रकार्यमा निर्मित छ। तपाईंले वास्तवमै फाईल सम्पादन गर्नुपर्‍यो, whitelist.inc.php, र IP ठेगाना थप्नुहोस् जुन IP ठेगानाहरूको एर्रेमा ब्लक गरिएको छ।
यदि तपाईं निश्चित हुनुहुन्न कि आईपी ठेगाना अवरुद्ध गरिएको छ भने, म यो क्वेरी प्रयोग गरेर डाटाबेस क्वेरी गर्न सक्षम भयो:
SEF * FROM `wp_bad_behavior` जहाँ% अनुरोध_यूरी` '% लग इन%' लाई मनपर्‍यो
टैग: खराब बानीकालो सूचीब्लग टिप्पणीहरुटिप्पणी स्प्यामस्पाम टिप्पणीहरूस्वेतसूची
आरएसएस: तपाईको फिड लिंक स्पष्ट बनाउनुहोस्
र नयाँ वर्षको शुभकामना। शीर्ष १००,००० बनाएकोमा बधाई छ!
र नराम्रो व्यवहारको बारेमा मलाई सम्झाउनु भएकोमा धन्यवाद। मैले सोचेको थिएँ कि मैले यसलाई स्थापित गरें र केहि स्प्याम टिप्पणीहरूको मात्रामा अलि बढी अभिभूत हुँदैछु जुन मैले पछिल्लो दिनमा प्राप्त गरे। साथै, मेरो (तपाईंको भन्दा धेरै विनम्र) तथ्या ;्कहरूलाई हेरेर, मैले याद गरे कि मेरो ब्लग ट्राफिकको ठूलो सम्झौता गैर-ब्राउजरबाट आएको हो; अन्य शब्दहरूमा स्पाम बॉटहरू।
Askimet पछिल्लो केहि दिनहरुमा लगभग comment० टिप्पणी प्रयासहरु अवरुद्ध गरिएको छ।
जे भए पनि, तपाइँको लेख पढेपछि, मैले ब्लग सेटिंग्स द्वारा दोहोरो जाँच गरें, र - सामान्य लेट रिट त्रुटि - मैले यो पनि प्लग-इन सक्रिय गर्न बिर्सेको देख्यो। अब यो चलिरहेको छ र म जान्न उत्सुक छु कि तथ्या how्कहरू कसरी जान्छन्।
जनवरी १, २०१ 8 १२::2007 अपराह्न
मलाई यो प्लगइन डगमा दर्साउनु भएकोमा धन्यवाद। मैले मेरो टिप्पणी स्प्याम यसलाई स्थापना गरेदेखि तल आएको देखेको छु।
जनवरी १, २०१ 12 १२::2007 अपराह्न
म स्प्याम कर्मा २.२ लाई मन पराउँछु
जनवरी १, २०१ 22 १२::2007 अपराह्न
सुन्नुहोस् कि केही ब्लगर्सलाई प्लग-इनको साथ केही समस्या भयो, उनीहरूको प्रणालीलाई ढिलो गर्दै, सर्वरमा अतिरिक्त कामको भारको कारण।
यहाँ एक प्रोग्रामर हो जुन वैकल्पिक एन्टी-स्प्याम प्लग इनमा काम गर्दैछ: